Bagaashkii sarnaa dooni ganacsi oo Boosaaso ku soo caariday oo la badbaadinayo (dhegayso) – Radio Daljir
Bagaashkii sarnaa dooni ganacsi oo Boosaaso ku soo caariday oo la badbaadinayo (dhegayso)
Febraayo 8, 2018 5:06 g 0
Waxaa ka socoda xeebta Magaalada Bosaaso Xarunta Gobolka bari Howlgal lagu bad baadinayo Dooni ay saarantahay Agab ka badan 9 Milyan oo Doolar. taas oo ku soo Caariday Xeebta Bosaaso .
Waxaa ladhisay Wado jay ah oo lasaaray xeebta si loo gaaro doonta kadib markii lasaaray Koontiinaro iyo Ciid farabadan si gaadiidka ay Udulmaraan si ay ugaaraan halka ay doonta ku Caariday .
Ganacsatada iyo Bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si Mutadawac Nimo ah uga qayb qaadanaya bad baadinta hantida Saaran doonidan.
Sheekh Fu,aad Xaaji oo ah Gudoomiyaha Gudiga Badbaadinta Doonta ayaa Xasan Heykal ugawaramay Shaqada sida ay usocoto caawa ,iyo in lagu dhawaaday Doontii .